ဂရင်းဖဲတာဝါ မီးလောင်မှု - ဝီကီပီးဒီးယား
မီးလောင်နေသော Grenfell Tower (၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇ 04:43 BST အချိန်တွင် ရိုက်ကူးထားသည်)
ဂရင်းဖဲတာဝါ မီးလောင်မှု (Royal Borough of Kensington and Chelsea)
Royal Borough of Kensington and Chelsea၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ဂရင်းဖဲတာဝါ မီးလောင်မှု (Greater London)
Greater London၏ မြေပုံကို ပြသရန်
00:54 BST (အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ပထမဆုံး ခေါ်ဆိုမှု လက်ခံရရှိချိန်)
ခန့်မှန်း ၂၄ နာရီကြာ
၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၀၆-၁၄)
Grenfell Tower, မြောက်ကင်ဆင်းတန် ရပ်ကွက်၊ လန်ဒန်မြို့၊ အင်္ဂလန်၊ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း
51°30′50″N 0°12′57″W﻿ / ﻿51.5140°N 0.2158°W﻿ / 51.5140; -0.2158ကိုဩဒိနိတ်: 51°30′50″N 0°12′57″W﻿ / ﻿51.5140°N 0.2158°W﻿ / 51.5140; -0.2158
ဂရင်းဖဲ‌တာဝါမီးလောင်မှုသည် အင်္ဂလန်၊ လန်ဒန်မြို့အနောက်ပိုင်း၊ မြောက်ကင်ဆင်းတန် ရပ်ကွက် ရှိ ၆၇ မီတာ (၂၂၀ ပေ) မြင့်သော ၂၄ ထပ်တိုက် အိမ်ရာတစ်လုံးတွင် ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇ ၌ ဖြစ်ပွားသည်။ မြို့ပြရဲတပ်ဖွဲ့က လူ ၃၀ သေဆုံးကြောင်း အတည်ပြုပြီး၊ ၂၈ ဦး ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် သေဆုံးပြီဟု ယူဆကြောင်း၊ ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၇ အထိ မျှော်လင့်သမျှတွင် အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများ မြှင့်တက်လာနိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု သတိပေးထားသည်။
အရေးပေါ်ဌာနသည် မီးလောင်မှု ပထမ သတင်းပေးချက်ကို ဒေသစံတော်ချိန် ၀၀:၅၄ ၌ ရရှိပြီး၊ မီးသည် ၂၄ နာရီခန့် လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ အစဦးတွင် မီးသတ်ကား ၄၅ စီးနှင့် မီးသတ်သမား ရာကျော်သည် မီးလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားပြီး၊ အဆောက်အဦ၏ ကျန်အပိုင်းများ ပျက်စီးသွားပြီးနောက် ပိုမြင့်သော အလွှာရှိ မီးထွက်ပေါက်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသည်။ အဆောက်အဦ ပြိုကျမည် စိုး၍ အနီးအနားရှိ နေထိုင်သူများကို နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့သော်လည်း၊ အဆောက်အဦသည် တော်ရုံနှင့် မပြိုလောက်အောင် ခိုင်မာနေခဲ့သည်။
ကနဦးမီးလောင်ချိန်တွင် တစ်ယောက်အိပ် နှစ်ယောက်အိပ် ၁၂၀ ခန်းပါသည့် အထပ်များတွင် လူပေါင်း ၆၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေနိုင်ခဲ့သည်။ မီးသတ်သမားက ၆၅ ဦး ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ၇၅ ဦးသည် လန်ဒန်တဝိုက် ဆေးရုံ ၅ ရုံတွင် တင်ထားပြီး၊ ၁၇ ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသည်။ ရှာဖွေမှုများကို ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၇ တွင် အဆောက်အဦ အန္တရာယ် မကင်းမှုကြောင့် ခေတ္တ ရပ်ထားပြီး၊ နောက်တစ်ရက်တွင် ကယ်ဆယ်သူများကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီး၊ ထိပ်ဆုံးအလွှာထိ ရောက်ရှိ ရှာဖွေသည်။ မီးလောင်မှု အကြောင်းရင်းကို မသိခဲ့ကြချေ။ မီးကူးလောင်မှု လျင်မြန်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ မကြာသေးမီက နံရံပြည့် ကပ်လိုက်သော အပြင်ပိုင်း အလှဆင် ကြွေပြားအကာများကြောင့်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
လန်ဒန် မြို့တော်ဝန် ဆဒစ်ခန်းက မီးသတ်ဌာနက လာရောက်မကယ်မီ၊ လူများကို သူတို့တိုက်ခန်းထဲ နေမြဲအတိုင်း နေရန် ပြောခဲ့သော မီးဘေးလမ်းညွှန်ချက်များကို ဝေဖန်လိုက်သည်။ ဤအကြံဉာဏ်ကို လိုက်နာသူများ သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ ဤအကြံမှာ အဆောက်အဦတွင်း ဖြစ်သည့် မီးလောင်မှုကို ညွှန်းရာ၌ တည်မှီပြီး၊ မီးသည် အဆောက်အဦ အပြင်ပိုင်းမှ တစ်ဆင့် လျင်မြန်စွာ ကူးစက်သွားသည့်အခါ မဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ အကြံ ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၁၃ ကတည်းက၊ အိမ်ရာအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော ဂရင်းဖဲအက်ရှင်းဂရုသည် မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် တိုက်စီမံခန့်ခွဲရေးကို မီးကြီး အကြီးအကျယ် လောင်ပြီးမှ မီးဘေးသတိပေးချက်နှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ကောင်းကောင်းလုပ်မှာလားဟု သတိပေးခဲ့သည်။ ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၇ တွင် ဖြစ်စဉ်အပေါ် ကိုင်တွယ်ပုံကို အဝေဖန်ခံနေရသော ဝန်ကြီးချုပ် သီရဆာ မေးက မီးဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေ ၅ သန်းကို ကြေညာလိုက်ပြီး၊ အိမ်ရာမဲ့သွားသူများသည် စတာလင်ပေါင် ၅၅၀၀၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် အနည်းဆုံး ငွေသား ပေါင် ၅၀၀ ပေးအပ်ရန်နှင့် ငွေစာရင်းအကောင့် တစ်ခုလျှင် ပေါင် ၅၀၀၀ ပေးရန်တို့ ဖြစ်သည်။
၁.၃ Safety concerns
၁.၄ Grenfell Action Group
၂ မီးဘေးနှင့် သေဆုံးသူများ
၃.၁ ဂရင်းဖဲအက်ရှင်ဂရု သတိပေးချက်
၃.၂ တရားဝင်ပေါ်လစီများနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း
၃.၃ မီးဘေးလုံခြုံရေးသုံးသပ်ချက်ကို ချောင်ထိုးထားခြင်း
၃.၄ ကောင်စီကို ဝေဖန်ခြင်း
၃.၅ မီးဘေးလုံခြုံရေး အဆောက်အဦ စံနှုန်းများကို ဝေဖန်ခြင်း
၄.၂ အဖွဲ့အစည်းများ တုံ့ပြန်မှု
၄.၃ အစိုးရ တုံ့ပြန်မှု
၅.၁ ၁၄ ဇွန်
၅.၂ ၁၅ ဇွန်
၅.၃ ၁၆ ဇွန်
၅.၄ ၁၇ ဇွန်
၅.၅ ၁၈ ဇွန်
၅.၆ ၂၁ ဇွန်
Grenfell Tower in 2009, before refurbishment
၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇
၆၇ မီတာ (၂၂၀ ပေ)
ဂရင်းဖဲတာဝါသည် လန်ဒန် ‌အနောက်စွန်း မြောက်ကင်ဆင်းတန်ရပ်တွင် ရှိပြီး၊ အလုပ်သမားလူတန်းစား အိမ်ရာများ ဝန်းရံထားသည်။ တာဝါကို ဘိုရော့ကောင်စီ(borough council)ကိုယ်စား၊ အင်္ဂလန်တွင် အကြီးမားဆုံး အိမ်ငှားစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း(TMO) ဖြစ်သော ကင်ဆင်းတန်နှင့် ချဲလ်ဆီး အိမ်ငှားစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း (Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO))က ခန့်ခွဲ၍ ဘိုရော့အပိုင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်မှု ၁၀၀၀၀ ခန့်ကို စီမံခန့်ခွဲနေရသည်။
၂၄ ထပ်ရှိ တာဝါဘလောက်ကို ကလစ်ဖို့ ဝါးဒင်နှင့် အသင်းက ထိုခေတ်က အကြမ်းပတမ်း စတိုင်နှင့် ၁၉၆၇ တွင် ဒီဇိုင်း ထုတ်သည်။ ၁၉၇၀ တွင် ကောင်စီက ကြမ်းခင်းအဆင့်အဖြစ် ဆောက်လုပ်ရေး စတင်သည်။
ကောင်စီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကန်ထရိုက်တာများ ဖြစ်သော လန်ဒန်မြို့၊ လေ့တန်၏ A E Symes အဖွဲ့က ၁၉၇၂ တွင် စတင် ဆောက်လုပ်ပြီး၊ ၁၉၇၄ တွင် ပြီးစီးသည်။ ၆၇ မီတာ (၂၂၀ ပေ) မြင့် အဆောက်အဦတွင် အိပ်ခန်း တစ်ခန်း၊ နှစ်ခန်းတွဲ ၁၂၀ ပါသော အလွှာများ (၂၄ ထပ်တွင် အထပ် ၂၀ မှာ တစ်ထပ်လျှင် အိမ်ထောင်စု ၆ စုနှုန်းနှင့် ကျန်လေးထပ်မှာ အလွတ်သဘော ထားသည်) ပါဝင်ကာ၊ လူပေါင်း ၆၀၀ ထိ နေထိုင်ပြီး၊ ၂၀၁၅-၁၆ တွင် ပြန်လည် ပြုပြင် မွမ်းမံခဲ့သည်။
အဆောက်အဦ မူလတည်ဆောက်သူ ဗိသုကာချုပ် Nigel Whitbread က အဆောက်အဦကို သေချာ ‌ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် ဖြစ်၍ နောင် နှစ်တစ်ရာ ခံလိမ့်မည်ဟု ၂၀၁၆ တွင် ပြောခဲ့သည်။
တာဝါကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန် ၂၀၁၂ တွင် အစီအစဉ်ကို အများပြည်သူသို့ ချပြသည်။ Studio E Architects က ကြီးကြပ်သော စတာလင်ပေါင် ၈.၇ သန်း ကုန်ကျသည့် ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုကို ကန်ထရိုက်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး(contract administration)အတွက် (Artelia)နှင့် ပူးပေါင်းသော အိစ်ဆပ်ဆက်(East Sussex)ပြည်မှ ဖောရက်ရိုး(Forest Row)ရွာ၏ ရိုင်ဒန်လီမိတက်(Rydon Ltd)ကုမ္ပဏီက တာဝန်ခံ၍ စပယ်ရှယ်လစ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် မက် ဖော့ဒမ်း(Max Fordham)က တာဝန်ခံကာ ၂၀၁၆ တွင် ပြီးစီးသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တွင် ပရောဂျက်၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်၊ အဆောက်အဦ သပ်ရပ်လှပစေရန် ဟူ၍ ကွန်ကရစ် အကြမ်းထည်တွင် ပြတင်းပေါက်အသစ်များနှင့် အလူမီနီယံ ကန်ပဆိုက် မိုးရေကာ ကြွပ်ပြားသစ်များ ကပ်ခြင်း(aluminium composite rainscreen cladding) ပြုလုပ်သည်။ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးကို သုံးသည်။ ကွိုင်အုပ်ထားသော အလူမီနီယံ ၂ ပြားပါသည့် အာခရွန်းနစ်၏ ရေးနိုဘွန်း(Arconic's Reynobond)နှင့် ရေးနိုလပ် အလူမီနီယံ ပြား(Reynolux aluminium sheets) ဖြစ်သည်။ ထိုဟာများအောက်တွင်၊ တိုက်ခန်းနံရံ၏ အပြင်ဘက်ကို အသေစွဲထားသော စီလိုတက် အပူကာ(Celotex RS5000 PIR thermal insulation)များ ရှိသည်။ ထိုလုပ်ငန်းကို အိစ် ဆပ်ဆက်(East Sussex)၊ ခရိုးဘိုရော့(Crowborough)မှ ဟာလီဖာ့ကိတ်(Harley Facades)က တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ၂.၆ သန်း ကုန်သည်။
မူလကန်ထရိုက်တာ ဖြစ်သော လိဒ်ဘစ်တား(Leadbitter)သည် KCTMO အိမ်ရာမြေအဖွဲ့အစည်း၏ ပယ်ချခြင်းကို အဘယ်ကြောင့် ခံရသနည်း ဟူမူ သူတို့ ပြောသော ၁၁.၂၇၈ သန်းသည် ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန် ခွင့်ပြုပေးထားသော ဘတ်ဂျက်ထက် ၁.၆ သန်း ဈေးမြင့်နေသောကြောင့် ဖြစ်‌သည်။ ကန်ထရိုက်ကို ယှဉ်ပြိုင်သူ တင်ဒါရှင်သို့ ပေးလိုက်သည်။ တင်ဒါ ရရှိသူ ‌ရိုင်ဒန် ပေးသော ဈေးမှာ လိဒ်ဘစ်တားထက် ၂.၅ သန်း နည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မီးလောင်ပြီး သုံးလေးငါးနာရီအကြာတွင်၊ မွမ်းမံရာ၌ ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီများထဲမှ တခုဖြစ်သည့် လေဝင်လေထွက်ကုမ္ပဏီ ဝစ်ယူကေ(WITT UK)သည် ၎င်း၏ ဝက်ဆိုဒ်မှနေ၍ မွမ်းမံခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အကိုးအကားများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်သည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်စဉ်က အဆောက်အဦ၌ တပ်ဆင်ရသော လေ၊ မီးခိုး ဝင်ထွက်ပေါက်နှင့် စွန့်ထုတ်ခြင်း စနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ခံခဲ့၍ ဖြစ်သည်။
နေထိုင်သူများသည် မီးဘေးလုံခြုံရေးနှင့် တိုက်ခန်းထိန်းသိမ်းရေး မအောင်မြင်မှုအတွက် ကောင်စီကို ဝေဖန်ကြသည်။
ဇူလိုင် ၂၀၁၄ ထုတ် ဂရင်းဖဲတာဝါ သတင်းစာငယ် တစောင်တွင်၊ KCTMO က မီးလောင်မှု ဖြစ်လျှင် နေထိုင်သူများသည် တိုက်ခန်းအတွင်း နေရန် (သင်တို့ကို ဘာလုပ်ပါ မပြောမချင်း နေမြဲအတိုင်း နေကြပါဟူသော အလွန် ကောင်းမွန်သည့် စံပြုချက်) ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး အထပ်တထပ်စီတွင် ရှိသော ရှေ့တံခါးများသည် မိနစ် ၃၀ ကျော်ထိ မီးဘေးမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
၂၀၁၆ မေလ စာစောင်တွင် မီးသတ်က ပေးသော အကြံဉာဏ်ဟု ဆိုကာ အလားတူ သတင်းမျိုး ပါလာသည်။
မီးခိုးလန့်စနစ် အဆင့်မြှင့်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ မီးသတ်မှ အခိုင်အမာ ပြောလိုသည်မှာ မီးသည် သင့်ရှိနေသော အိမ်ထဲမှ လောင်ခြင်း မဟုတ်လျှင်၊ သင့်အိမ်တွင်မှာပဲ နေထိုင်ခြင်းသည် အလုံခြုဆုံး ဖြစ်သည်။ မီးသတ်သည် သတင်းပို့ချက်ကို ရရချင်း အလျင်အမြန် ရောက်လာမည်သာ ဖြစ်သည်။
မီးလောင်ပြီးနောက် ကောင်စီခေါင်းဆောင် နီကိုလပ် ပဂက် ဘရောင်းက မွမ်းမံမှုကို မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်စဉ် ဂရင်းဖဲတာဝါ နေထိုင်သူများသည် ရေဖြန်းတပ်ရန် လိုလားသည့် အမြင်မျိုး မရှိခဲ့ဟု ပြောသည်။ တပ်မည် ဆိုပါကလည်း မွမ်းမံခြင်း ကြန့်ကြာမည်ကို စိုးခဲ့ကြသည်ဟုလည်း ပြောသည်။ အိုင်တီဗီသတင်းထောက် ဂျိုးဟီးစ်က ရေဖြန်းတပ်မည့်အကြောင်း တယောက်မှ ပြောသံ မကြားခဲ့ကြဟု ဆိုသည်။ ၂၀၁၂ အစီရင်ခံစာတွင် ဗြိတိန် အလိုအလျောက် ‌မီးဘေးရေဖြန်း အသင်းက ရေဖြန်းများကို ဂရင်းဖဲ‌တာဝါအတွက် တထပ်လျှင် ပေါင် ၁,၁၅၀ နှုန်းဖြင့် တတိုက်လုံးအတွက် ပေါင် ၁၃၈,၀၀၀ ကုန်ကျခံ၍ ပြန်လည် တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
၁၈ ဇွန် ၂၀၁၇ တွင်၊ နစ်နာသူတဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဂျော်ဂျီယို ဂွတ္တာဒီ(၂၇ နှစ်)သည် မီးမလောင်မီ သုံးလအလိုက ထိုတိုက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာသော ဗိသုကာ ဖြစ်ပြီး၊ မကြာသေးခင်က ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပြီးစီးသော်လည်း၊ သူ၏ သားက အဆောက်အဦကြီး မလုံခြုံဟု ထင်နေကြောင်း သူ့ကို ပြောပြခဲ့သည်ဟု မီဒီယာများကို ပြောပြသည်။
Grenfell Action Group[ပြင်ဆင်ရန်]
နေထိုင်သူများအဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သော ဂရင်းဖဲအက်ရှင်ဂရု(GAG)သည် အကြီးစားလုံခြုံရေးပြဿနာများကို အလေးပေး ဖော်ပြသည့် ဘလော့ တခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ တွင် လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးအရာရှိ တဦးက ပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၂ မီးဘေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စာတမ်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ တာဝါရှိ မီးသတ်ကိရိယာများသည် မစစ်ဆေးသည်မှာ လေးနှစ်တောင် ရှိပြီ၊ ဤတိုက်ရှိ မီးသတ်ဆေးဗူးများသည် သက်တမ်းကုန်နေပြီ၊ အချို့မှာ ဟောင်းမြင်းလွန်း၍ မီးသတ်ဘူးများပေါ်တွင် မဖွယ်မရာ စာလုံးများ လက်ကမြင်းထားသည်။ ဤအကြောင်းကို KCTMO management နှင့် ကောင်စီသို့ အကြောင်းကြားသော်လည်း မည်သည့် ပြန်ကြားချက်မှ မရရှိခဲ‌့ချေ။
ဇူလိုင် ၂၀၁၃ တွင် ကောင်စီက ဂရု၏ ဘလော့ဂါများကို နာမည်ဖျက်မှု အသရေဖျက်မှုနှင့် တရားစွဲမည်ဟု ဥပဒေနှင့် ခြိမ်းခြောက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ တွင် မီးများ လောင်လျှင် လူများ ပိတ်မိနေနိုင်သည်၊ အဆောက်အဦတွင် ဝင်ပေါက် တပေါက်သာ ရှိပြီး၊ ကော်ရစ်ဒါတွင် မွေ့‌ယာဟောင်းများ ကဲ့သို့သော အမှိုက်များနှင့် ပြည့်နေသည်ကိုလည်း မရှင်းလင်းဟု GAG က ထောက်ပြသည်။ သည် မကြာခဏဆိုသလိုပင် အခြား တာဝါတိုက်များတွင် လောင်သောမီးကို မှီး၍ ဂရင်းဖဲအတွက် အန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် က အွန်လိုင်းတွင် (KCTMO)ကို တိုက်ခိုက်သော ဆောင်းပါး တင်လိုက်ပြီး၊ စည်းကမ်းမရှိသော မကောင်းဆိုးဝါး၊ မာဖီးယားဂိုဏ်းအသေးစားဟု ဆိုကာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး ဥပဒေများကို လျစ်လျူပြုထားသည်ဟု ကောင်စီကို စွပ်စွဲလိုက်သည်။ GAG က "အမှိုက်စမှ မီးပွား ဖြစ်လာလျှင် KCTMO အိမ်ရာမြေအဖွဲ့အစည်းသည် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မရှိသည်ကို ပေါ်လွင်သွားပြီး ချိနှဲ့လာလိမ့်မည်ဟု လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြေပိုင်ရှင်တွေဟာ အိမ်ငှားသူနဲ့ နေထိုင်သူတွေ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် တာဝန်ရှိတာကို ဘယ်လောက်ကြာကြာနှင့် ဘယ်လို ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ဥပေက္ခာ ပြုထားလဲ ဆိုတာကို အာဏာပိုင်တွေကို သိအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲက ဖြစ်နိုင်သမျှ လုပ်ဖို့၊ KCTMO ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အမှားတွေကို ခြောက်လှန့်ဖို့ ဒီဘလော့မှာ တင်မယ့် စကားလုံးတွေ ပြန်လာမယ့် အချိန် မကြာတော့ပါဘူး၊ အဲအချိန်ကျမှ သူတို့ကို သတိမပေးဘူးလို့ မပြောပါနဲ့"ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဂရုသည် ဂရင်းဖဲတာဝါတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေး လေ့ကျင့်မှုများကို ဝေဖန်သည့် အခြား ဆောင်းပါးများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မီးသည် ၁၄ ဇွန် ၂၀၁၇ နံနက် အစောပိုင်းတွင် စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ လန်ဒန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည် ၀၀:၅၄ တွင် ဖုန်းလက်ခံရရှိပြီး၊ မီးသည် လေးလွှာမှ စလောင်ကြောင်း သတင်းပို့ကြသည်။ အဆောက်အဦအတွင်း ရှိ လူများသည် အနီးပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နီးနားချင်းများကို သတိပေး၍ အဆောက်အဦမှ ထွက်ခွာရန် စတင်ကြသည်။ ရမဒန်ဥပုသ်နေ့ ဖြစ်၍၊ အာရုဏ်ဆွမ်း(suhur) ထချက်ရန် မူစလင်များ နိုးနေကြရာ၊ သူတို့ သတိပေးမှုကြောင့် အိမ်နီးချင်းများ လွတ်မြောက်ကြရသည်။
မီးသည် ထိုတိုက်ခန်း၏ မီး‌ဖိုချောင်မှ ထလောင်ပြီး၊ မီး‌လောင်သော အဆောက်အဦ၏ အပြင်ဘက်သို့ ကူးစက်သည်တွင် ကြောက်စရာကောင်းသော နှုန်းဖြင့် လောင်ကျွမ်းတော့သည်။ မီးသတ်ကား ၄၅ စီးမှ မီးသတ်သမား ၂၅၀ သည် လူကယ်ရန် နှင့် မီးညွန့် ကျိုးအောင် ကြိုးစားကြသည်။ မီးလန့်အလန်း မြည်ပြီး ခြောက်မိနစ်တွင် ပထမ အသုတ် ရောက်သည်။ မီးသတ်သမားများသည် လူကယ်ရန် အဆောက်အဦအတွင်း ဝင်ရာ ပြင်းထန်သော အပူရှိန်ကြောင့် နှောင့်နှေးရသည်ဟု သတင်းပို့ကြသည်။ မီးရှိန်ပြင်းစဉ်၊ ရာပေါင်းများစွာသော မီးသတ်သမားများသည် အဆောက်အဦအတွင်း ရောက်ရှိနေခဲ့သည်။
တိုက်ပြင် ထိုးထွက်လောင်ကျွမ်းနေသော မီးသည် အပေါ်ဘက်သို့ ကူးစက်သွားပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် တိုက်အတွင်း ပြန်လည်ကူးစက် လောင်ကျွမ်းသည်။ အသက်ရှုပိုက် တပ်ထားသော ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် အဆောက်အဦထဲ ပိတ်မိနေသော လူများကို ရှာဖွေ ကယ်ထုတ်ကြသည်။ လေးထပ်တွင် မီးခိုးလုံးများ ဖုံးနေ၍ ဘာမှ မမြင်ရဟု တင်ပြကြသည်။ သုံးနာရီကြာ မီးသတ်ပြီးသော မူလမီးသတ်သမားအဖွဲ့ကို လူသစ်များဖြင့် အစားထိုးကာ မီးဆက်သတ်ကြသည်။ လန်ဒန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က မီးသတ်သမားများသည် အဆောက်အဦမှ လူ ၆၅ ဦးကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၄ ထပ်လုံး ရောက်ရှိသည်ဟု တင်ပြသည်။
နေထွက်လာသည်အထိပင်၊ မီးသတ်သမားများသည် မီးနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း၊ လူများ ပိတ်မိနေသည့် နေရာများကို ရေဖျန်းရန် ကြိုးစားနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦမှ မီးစများ ကျလာသောကြောင့် စောင့်ကြည့်နေသော လူအုပ်ကြီးသည် နောက်သို့ ရှဲသွားကြသည်။ ၄ နာရီ ၁၄ မိနစ်တွင်၊ မြို့ပြရဲဌာန အရာရှိများက ဘေးက ရပ်ကြည့်နေသော လူအုပ်ကြီးကို ဤအတိုင်း မနေကြရန်၊ အဆောက်အဦတွင်း ပိတ်မိနေသော မိမိ အသိအကျွမ်းများကို ဖုန်းဆက်နိုင်လျှင် ဖုန်း၊ အင်တာနက် စသည်ဖြင့် ဆက်သွယ်ကြပြီး၊ မီးသတ်အလာကို စောင့်မနေဘဲ မိမိတို့ ဘာသာ လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားဖို့ ပြောရန် ညွှန်ကြားသည်။ ၅ နာရီတွင် ‌အဆောက်အဦသည် လောင်နေဆဲ၊ ဆိုးဆိုးရွားရွားလည်း ပျက်စီးနေပြီ။
မျက်မြင်သက်သေများက လူအချို့ အထဲ၌ ပိတ်မိနေသည့်အပြင်၊ အချို့က ကလေးချီထားပြီး၊ အကူအညီ လို၍ ပြတင်းပေါက်မှ လက်ပြနေကြောင်း ပြောကြသည်။ မိဘများသည် ကလေးများကို အောက်ရှိ လူအုပ်ထဲ ပစ်ချပေးကြကြောင်း မျက်မြင် ၂ ဦး ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ထိုထဲတွင် ကိုးထပ် သို့ ဆယ်ထပ်မှ ပစ်ချလိုက်ပြီးနောက် ဖမ်းမိသွားသော မွေးကင်းစ တစ်ဦးနှင့် ငါးထပ် သို့ ခြောက်ထပ်မှ ကျလာသော ကလေးငယ် တစ်ဦးတို့ ပါဝင်သည်။ အချို့ မျက်မြင်သက်သေများက လူ အချို့သည် ခုန်ချကြသည်ဟု ပြောပြသည်။ အနည်းဆုံး လူတစ်ဦးသည် စောင်များကို ဖုထုံး ချည်ကာ ကြိုးလုပ်ပြီး မီးလောင်နေသော အဆောက်အဦမှ လွတ်မြောက်သွားသည်။ အဆောက်အဦရှိ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းမှ ပေါက်ကွဲသံများကိုလည်း မကြာမကြာ ကြားကြရသည်။
၁၄ ဇွန် မွန်းလွဲသည့်တိုင် တာဝါ၏ အထက်ထပ်များတွင် မီး ဆက်လက် လောင်ကျွမ်းနေသည်။ နောက်ထပ် ၂၄ နာရီအတွင်း မီးညွန့်ကျိုးလိမ့်မည်ဟု မီးသတ်သမားများက မျှော်လင့်နေခဲ့သည်။ အဆောက်အဦ ပြိုကျမည့် အန္တရာယ် ရှိသော်ငြားလည်း၊ တည်ဆောက်ရေး အင်ဂျင်နီယာများက အန္တရာယ် မရှိနိုင်လောက်ကြောင်း၊ ရှင်ကျန်သူများနှင့် အလောင်းများကို ကောက်ရန် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ဝင်‌သွားနိုင်လောက်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။
မီးသတ်သမား တစ်ယောက်စီ၏ ခေါင်းပေါ်၌ ကန့်လန့်ဖြတ် ဒိုင်းကာများ တပ်‌ဆင်ပေးပြီး၊ မတော်တဆ အုတ်ကြွပ်ပြားများမှ မီးစများကဲ့သို့သော လေးလံသည့် အပျက်အစီးများ ကျလာခြင်းမှ ကာကွယ်သည့် အစီအမံများ ပြုလုပ်ပေးသည်။ (မီးလောင်သည့် နေရာတွင် အများပြည်သူသုံး သင်ပုန်းဖြူပေါ်တွင် တစုံတစ်ယောက်က ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ၊ ဆွက်အဖွဲ့(God Bless You, SWAT)ဟူသော စာသားကို ရေးသားထားသည်။)
မီးလောင်ပြီးနောက်၊ မီးသတ်မှ ဒရုန်းများ လွှတ်တင်ပြီး ပြတင်းပေါက်များကို ဖြတ်ကာ သေဆုံးသူများကို ‌ရှာဖွေကြသည်။
၁၇ ဇွန် ၂၀၁၇ အထိ၊ လူပေါင်း ၃၀ သေဆုံးပြီး၊ နောက်ထပ် ၂၈ ဦးသည် ပျောက်နေခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ သေပြီ သော်လည်းကောင်း ယူဆကြောင်း ရဲမှ အတည်ပြုသည်။ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၇ တွင် ရဲက ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်မှုအသစ်နှင့် အတူ မျှော်လင့်ရသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အတွက် ကိန်းဂဏန်းသည် မြင့်တက်လာကြောင်း ကြေညာသည်။ ဘီဘီစီက သေဆုံးသူစာရင်းသည် ၇၀ ထိ မြင့်တက်နိုင်သည်ကို သဘောပေါက်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထိခိုက်သေဆုံးမှုများသည် အောက်ပါအတိုင်း တိုးလာသည်။
ဗြိတိန်စံတော်ချိန် ၅ နာရီတွင် မီးခိုးများ ရှုရှိုက်မိခြင်းကြောင့် လူများ‌စွာ ကုသခံနေရသည်ဟု ရဲက တင်ပြသည်။
၆ နာရီခွဲထိ၊ လူအယောက် ၅၀ ကို ချဲလ်ဆီးနှင့် ဝက်မင်စတာ ဆေးရုံ၊ တော်ဝင်ကော့လိပ်ဆေးရုံ၊ တော်ဝင် အခမဲ့ဆေးရုံ၊ စိန့်သောမတ်ဆေးရုံနှင့် စိန့်မေရီဆေးရုံ စုစုပေါင်း ၅ ရုံသို့ တင်ပို့ထားကြောင်း အစီရင်ခံသည်။
၉ နာရီခွဲထိ၊ လန်ဒန် မီးဘေး အထူးတာဝန်ခံ ဒန်နီ ကော်တွန်က မီးဘေ‌းကြောင့် လူသေဆုံးမှုများ ရှိသည် မှန်သော်လည်း၊ ‌အဆောက်အဦ ကြီးမားပြီး ရှုပ်ထွေးသည့်အတွက် ဘယ်နှဦး သေဆုံးမှန်း အတိအကျ မပြောနိုင်သေးကြောင်း တင်ပြသည်။ ကော်တွန်က ပြောသည်မှာ "ဒါက လုံးဝ မမျှော်မှန်းထားတဲ့ မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်ပါပဲ၊ ကျမ မီးသတ်သမား လုပ်လာတဲ့ ၂၉ နှစ်လုံးမှာ ဒီလောက်အတိုင်းအတာ ကြီးမားတာမျိုး တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး"ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
၁၂ နာရီထိ၊ မြို့ပြရဲတပ်ဖွဲ့မှ အစီရင်ခံသည်မှာ မီးလောင်မှုတွင် ၆ ဦး သေဆုံးကြောင်း အတည်ပြု၊ ဆေးရုံတွင် ၇၀ ကျော် တင်ထား၊ ၂၀ မှာ အသည်းအသန် ဖြစ်နေကြောင်း ဖြစ်သည်။ လူပေါင်းများစွာ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အတည်ပြုလိုက်သော သေဆုံး အရေအတွက်သည် နောက်တွင် ၁၂ ဦးထိ တိုးလာပြီး၊ နောက်တစ်နေ့တွင် ၁၇ ဦးထိ တိုးလာသည်။
၁၆ ဇွန်ထိ၊ ရဲက ပြောသည်မှာ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများ ရှိနိုင်လိမ့်ဦးမည်ဟု မထင်တော့ကြောင်း၊ မီးရှိန်ပြင်း၍ အချို့ ခံရသူများသည် ခွဲခြားရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးသော သေဆုံးစာရင်းသည် ၁၀၀ ကျော်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ အလောင်းများစွာ တာဝါထဲ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ၂၄ ဦးသည် ဆေးရုံ၌၊ ဤအထဲ ၁၂ ဦးသည် အရေးပေါ် ပြုစုနေရသည်။
In the morning the smoke plume was still visible overalong distance. (Grenfell Tower is the building behind, Frinstead House is in front.)
မီးလောင်သည့် အကြောင်းရင်းကို ၁၄ ဇွန်ထိ မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးချေ။ ‌မီဒီယာများစွာက အနာအဆာရှိသော ‌ရေခဲသေတ္တာ တစ်လုံးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြသည်။ လေးလွှာတွင် နေသူတစ်ဦးက သူ့အိမ်နီးချင်း၏ ရေခဲသေတ္တာ မီးလောင်ချိန်တွင် မနက် ၁ နာရီ ထိုးနေ၍၊ သူတို့သည် လူများ နိုးအောင် တံခါးများ ချက်ချင်း လိုက်ခေါက်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့၏ ‌ပွင့်နေသော တံခါးမှ တစ်ဆင့် မီးဖိုချောင်ထဲတွင် မီးတောက် သေးသေးလေး မြင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ နာရီဝက်အတွင်းတွင် အဆောက်အဦကို မီးက ဝါးမြိုလိုက်သည်ဟု ပြောပြသည်။
ရေဖြန်းစနစ် ကင်းမဲ့ခြင်းကိုလည်း များစွာ ဝေဖန်နေကြစဉ်၊ အဆောက်အဦ စည်းမျဉ်းများ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဂျော့ဖ် ဝီကင်ဆန်က အကယ်၍ ဂက်စ် ယိုစိမ့်နေသည် သို့မဟုတ် အုတ်ကြွပ်များက အနာအဆာ ရှိနေသည် ဆိုလျှင်၊ ရေဖြန်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းငယ်သာ ရှိမည်ဟု ၁၄ ဇွန်တွင် ဗိသုကာဂျာနယ်၌ ရေးသားသည်။ အများပိုင်စင်္ကြံများ၌ မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများ စုပုံထားသည်ဟု သတင်းရ၍ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းကြောင်း သိရသည်ဟု လည်း‌ ပြောသည်။ မီးသတ်သမဂ္ဂ အကြံပေး ဒေးဗစ် ဆစ်ဘာက အခန်းက စလောင်သည် မဟုတ်ဘဲ မီးဖိုခန်းမှ အမှန်တကယ် စတင်ခဲ့သည် ဆိုပါက ရေဖြန်းများက မီးတားနိုင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုက်သည်။
အချို့ တိုက်ခန်းနေထိုင်သူများက မီးစလောင်ချိန်တွင် မီးသတ်အလန်း မမြည်‌၊ သူတို့ လန့်နိုးလာသည်မှာ မီးသတ်အလမ်း မြည်၍ မဟုတ်ဘဲ၊ လူများက တံခါးကို ကြောက်လန့်တကြား ထုရိုက်၍ အကူအညီ အော်ဟစ်တောင်းခံသောကြောင့်သာ လန့်နိုးလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောစဉ်၊ အချို့ကလည်း အလမ်းမြည်သံနှင့် မီးခိုးလုံးများ မြင်ရ၍ မီးလောင်မှန်း သိသည်ဟု ပြောသည်။ မီးလောင်စဉ် မိမိတို့ တိုက်ခန်းတွင်း၌သာ နေထိုင်ရန် တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားသော ကောင်စီ၏ သတိပေးချက် "နေမြဲ"အကြံကို လျစ်လျူရှုခဲ့သူများ အသက်ရှင်သွားကြောင်း သူတို့က ပြောပြသည်။ အရေးပေါ်ဌာနသည် မီးများ ပြန့်နှံနေစဉ် မူလက "နေမြဲ"ဟု ထပ်တလဲလဲ ကြေညာနေသော်လည်း၊ နောက်တွင် ဤအကြံကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သည့် အချိန်တွင်မူ အဆောက်အဦမှ ထွက်ခွာရန် ခဲယဉ်းနေပြီ ဖြစ်သည်။
ဂရင်းဖဲအက်ရှင်ဂရုကလည်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော လန်ဒန်အိမ်ရာကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းကြီးက အစိုးရ၏ ညံ့ဖျင်းမှု၊ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များ စီမံခန့်ခွဲမှု လွဲမှားမှု၊ နေထိုင်သူများနှင့် သူတို့အိမ်ရာများကို မထီလေးစားပြုမူမှုများ ပေါင်းဆုံသွားသောအခါ ရလဒ်အဖြစ် ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းပြီး တားဆီးနိုင်ခဲ့သော ဝမ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ဂါဒီယန်းသတင်းစား အယ်ဒီတာတစ်ဦး ဖြစ်သော ဒေါင်း ဖော့စတာက ယူကေ၏ နက်ရှိုင်းသော မညီမျှမှု သင်္ကေတနှင့် ထင်သာနေသော နိုင်ငံရေးအကွက်များ၏ ယုတ်မာရက်စက်မှုဟု ဆိုသည်။
ကွတ်ဘန်းက ကြာရှည်စွာ စစ်ကြောမေးမြန်းနေမှုက ဘာမှားယွင်းသွားသလဲ အဖြေပေါ်လာရန် မလိုအပ်ချေ၊ တာဝါ၏ အုတ်ကြွပ်ပြားက မီးလောင်လွယ်ပြီး၊ ရေဖြန်းများကလည်း မတပ်ဆင်ထားခဲ့ချေ။ အစိုးရက ကြောက်လန့်နေသည်မှာ ဂရင်းဖဲတာဝါတွင် လောင်ကျွမ်းသွားသော အလောင်းများကို ကြမ်းကြုတ်မှုများကြောင့် သေဆုံးသွားသော အာဇာနည်များအဖြစ် ရှုမြင်ကြမှာကိုပင် ဖြစ်သည်ဟု ကွတ်ဘန်းက ထပ်ပြောသည်။
မီးလောင်ပြီးနောက်၊ ဂရင်းဖဲအက်ရှင်ဂရုက အဆောက်အဦကို ပိုင်ဆိုင်သော ကောင်စီကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သတိပေးလာခဲ့သော်လည်း ကောင်စီကိုယ်စား လူမှုအိမ်ရာများကို စီမံခန့်ခွဲပေးသည်ဟု ယူဆရသော KCTMO ကလည်း လျစ်လျူပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုပြီး၊ ၎င်းတို့၏ ဝက်ဆိုဒ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း တင်ထားသည်။
ဂရင်းဖဲတာဝါတင်မက RBKC အပိုင်း မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အလွန်ညံ့ဖျင်းသော မီးဘေး ကာကွယ်ရေး စံများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့မှာ မကြာသေးမီနှစ်များက မရေမတွက်နိုင်သော သတိပေးချက်များ တင်ခဲ့ဖူးသည်ကို ဤဘလော့ကို ပုံမှန် ဖတ်ရှုနေသူများ သိပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သတိပေးချက်များ အားလုံး မျက်ကွယ်ပြုခြင်း ခံရပြီးလျှင်၊ ဤကဲ့သို့ မီးဘေးကြီး ဖြစ်လာမှာကို ရှောင်လွှဲမရနိုင်တော့၊ တစ်ချိန်ချိန်၌ ဖြစ်လာတော့မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ခန့်မှန်းမိခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ ဝေဖန်မှုများသည် နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျဆင်းအောင် အသရေဖျက်မှု မြောက်သည်ဟု ဆိုကာ ကောင်စီကို ဝေဖန်သော အုပ်စုကို တားဆီးရန်၊ ၂၀၁၃ လေလံပွဲ တစ်ခုတွင် ကောင်စီက ဂရင်းဖဲအက်ရှင်ဂရုကို တရားဝင်ဥပဒေဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်က ဂရင်းဖဲတာဝါ မီးဘေးလုံခြုံရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေများ လိုချင်ကြောင်း ဘီဘီစီ ရေဒီယို(၄)သို့ ပြောကာ၊ တရားဝင် "နေမြဲ" ပေါ်လစီကို ဝေဖန်လိုက်သည်။ "ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းတာက တိုက်ခန်းနေ လူတွေက ဒီအကြံကို မနာယူဘဲ ထွက်ပြေးကြတယ်၊ ‌ဖြေကြားရမယ့် အချို့မေးခွန်းတွေ ရှိတယ်။ တာဝါတိုက်တွေများ နေထိုင်တဲ့ လန်ဒန်မြို့သူ မြို့သားတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒီ ညံ့ဖျင်းတဲ့ အကြံဉာဏ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု မရှိတာနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်ကို အန္တရာယ် မဖြစ်စေချင်ပါဘူး" ဖြေကြားသည်။
ကယ်ဆယ်သူများ မရောက်မီအထိ လူများ နေမြဲတိုင်း နေရန် စံပြ အကြံမှာ အဆောက်အဦအတွင်း လောင်သော မီးကို အခြေခံထားပြီး ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် မီးသည် အပြင်မှ အုပ်မြှိုက်၍ လျင်မြန်စွာ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းသည့်အခါ မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။
နိုင်ငံရေးသတင်းထောက် ဂျိုးဝပ်က ဘာဝဲသည် မီးဘေးလုံခြုံရေးသုံးသပ်စစ်ဆေးချက် ထုတ်ပြန်ရန် နှောင့်နှေးခဲ့ပြီး၊ တာဝါတိုက်များတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေး အစီရင်ခံစာကို လေးနှစ်ကြာအောင် ချောင်ထိုးထားခဲ့ကြောင်း အင်ဒီပင့်ဒင့်တွင် ရေးသားလိုက်သည့်အခါ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ် အိမ်ရာဝန်ကြီးဟောင်း ဂါဗင်ဘာဝဲသည် ဝေဖန်မှုများ ခံရသည်။ ဘားဝဲသည် ၂၀၁၇ တွင် သုံးသပ်ချက်ကို ဆွေးနွေးရန် ပါတီစုံ ပါလီမန် မီးဘေးလုံခြုံရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး အုပ်စုနှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း၊ ကြားဖြတ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာသည့်အခါ အ‌စည်းအဝေးကို ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘားဝဲ၏ ထိုင်ခုံနေရာ ပျောက်သွားပြီးနောက်၊ မကြာမီ ဒေါင်းနင်းလမ်း၏ အရာရှိချုပ် ခန့်အပ်ခံရသည်။ ဝပ်က ရေးသားသည်မှာ ဘားဝဲ ရာထူးမယူမီ နှစ်များစွာကတည်းကပင် မီးဘေးလုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းများ၏ သုံးသပ်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ခဲ့သော်လည်း၊ မလုပ်ဆောင် မဆောင်ရွက်ခဲ့ကြဟု ဖြစ်သည်။
ကောင်စီဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ယခင် KCTMO ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သူ၊ ကင်ဆင်းတန်အတွက် အသစ် ရွေးကောက်ခံရသော လွှတ်တော်အမတ် အင်မာဒင်းကုတ်က ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့သော မီးဘေးဟု ဝိသေသပြုကာ ကောင်စီသည် နေထိုင်သူများကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲလိုက်သည်။ "ဒီလို အရည်အသွေးညံ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး စံနှုန်းတွေက ဒီ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါနေတယ်ဆိုတာ မတွေးမိဘဲ မနေနိုင်ဘူး"ဟု သူမက ပြောသည်။ နေထိုင်သူများက ကောင်စီသည် သူတို့ကို ဘာမှ မပြောကြောင်းနှင့် သူတို့မှာ လူသန့်ရေး ("social cleansing")အစီအစဉ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရ ထိုနေရာမှ ပြောင်းရွှေ့ခံရမည့် စိုးရိမ်မှုများ ရှိသည်ဟု ပြောပြကြသည်။
ဂရင်းဖဲတာဝါသည် နိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး မြို့များထဲမှ တမြို့ ဖြစ်သော ကင်ဆင်းတန်နှင့် ချဲလ်ဆီး၏ တော်ဝင် ဘိုရော့တွင် တည်ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံး အိမ်ရာများထဲမှ အချို့တွင် ပါဝင်ပြီး၊ နိုင်ငံတွင် မည်သည့်နေရာထက်ကို ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု ကြီးမားဆုံး နေရာ ဖြစ်‌သည်။ ဂရင်းဖဲတာဝါတွင် ပိုဆင်းရဲသော သူများ၊ လူမျိုးနည်းစုများ အဓိက ပြွတ်သိပ်စွာ နေထိုင်သည်။ ကောင်စီကို ဘိုရော့၏ ပိုဆင်းရဲသော နေထိုင်သူများကို ဥပေက္ခာပြုထားသည်အတွက် ဝေဖန်ကြသကဲ့သို့၊ အချို့မှာ ဂရုမစိုက်မှုကို မီးလောင်မှု၏ လက်သည်အဖြစ် အပြစ်တင်ကြသည်။ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးက ရေးသားသည်မှာ ဤ မတော်တဆမှုသည် ဗြိတိန်၏ လူတန်းစား မညီမျှမှု နမူနာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မီးလောင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ထောင်ချရန် တောင်းဆိုမှုများ ရှိသည်။
၁၇ ဇွန် ၂၀၁၇ တွင် လွ‌တ်တော်အမတ်များက ကောင်စီကို နေထိုင်သူများက မီးဘေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ် မကင်း စိုးရိမ်ကြောင်း ထပ်ခါ တလဲလဲ ထုတ်ပြန်နေချိန်တွင် မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ရေလှောင်ကန်များတည်ဆောက်ရန် ရန်ပုံငွေ ၂၇၄ သန်းကို မသုံးဘဲ အဘယ်ကြောင့် စုဆောင်းထားသနည်းဟု ရှင်းပြရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
၁၈ ဇွန် ၂၀၁၇ တွင် ချက်ချင်းလက်ငင်း အကူအပံ့ မပေးသည့်အတွက် ကောင်စီသည် ပို၍ အဝေဖန် ခံလာရသည်။ အခင်းဖြစ်ပြီး လေးရက် ကြာသည်အထိ၊ အချို့မိသားစုများသည် ခိုကိုးဌာန၏ ကြမ်းပြင်ထက် အိပ်နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြသည်။
မီးဘေးလုံခြုံရေး အဆောက်အဦ စံနှုန်းများကို ဝေဖန်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖွတ်မြို့ရှိ မီးသတ်အကြီးအကဲ ဖြစ်သော ရိန်းဟတ် ရီးစ်က ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း နိုင်ငံ၏ မီးသတ်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လျော့ရဲမှုကို ဝေဖန်လိုက်သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်မူ ဤသို့မဟုတ်။ ၂၂ ထပ်မြင့်သော အဆောက်အဦများပေါ်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းလွယ်သော ကြွပ်ပြားများ တပ်ဆင်ခြင်းကို တားမြစ်ထားပြီး၊ မီးသတ်လှေကားများ၊ မီးသတ်နှင့် ဒဏ်ရာရသူ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူများက အသုံးပြုနိုင်သော မီးသတ်သုံး လှေကားခြင်းများကို လိုအပ်ကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြလေသည်။ 
မီးလောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေ၍ လတီမာလမ်း မြေအောက်ဘူတာရုံသည် လန်ဒန်မြေအောက် ဟမ္မားဆက်နှင့် မြို့တော်ယာဉ်လိုင်းများကို တစိတ်တပိုင်း ရပ်ပစ်လိုက်သည်။ A40 Westway ကို အသွားရော အပြန်ပါ ပိတ်လိုက်သည်။ ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများလည်း ပိတ်ဆို့ကုန်သည်။ ဟမ္မားဆက်နှင့် မြို့တော်ယာဉ်လိုင်း ဌာနများကို ၁၇ ဇွန်တွင်လည်း တာဝါပေါ်မှ အပိုင်းအစများ ကျလာမည့် စိုး၍ ခေတ္တ ပိတ်လိုက်ရသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦများမှ လူများကိုလည်း တာဝါ ပြိုကျလာမည် စိုး၍ ပြောင်းရွှေ့ပေးရသည်။
ဂရင်းဖဲတာဝါနှင့် တွဲဆက်နေသော Kensington Aldridge Academy ကို မီးလောင်ပြီးကတည်းက ပိတ်ထားသည်။ ကျောင်းသားများ စာသင်ရန်နှင့် စာမေးပွဲ ဖြေရန် အတွက်မူ ဤဧရိယာရှိ အခြား ကျောင်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့ သင်ကြားသည်။
၈ ဇွန် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DUP)ကြား သဘောတူညီချက် ထုတ်ပြန်ရန် မျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း၊ DUP အရင်းအမြစ်က လာသည့် သတင်းများအရ၊ မီးလောင်မှုကြောင့် သဘောတူညီချက် အချောသတ်ရန်နှင့် ကြေညာရန် နှောင့်နှေးမည်ဟု သိရသည်။ ကြေညာချက်ကို နောက်တပတ်အထိ ပြုလုပ်ဦးမည် မဟုတ်ဘဲ၊ Brexit ဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်ဟု ဘီဘီစီက ဆိုသည်။
နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲ ဖြစ်သော အိမ်ရာမြေညစာစားပွဲကို မီးလောင်မှုအပြီး နောက်တရက်တွင် ဖြစ်နေသောကြောင့် လန်ဒန်မြို့တော်က ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ဘဏ္ဍာစိုးအကြီးအကဲ ဖီးလစ် ဟမ်းမန်းက ညစာစားပွဲတွင် မိန့်ခွန်း ပြောရန် ဖြစ်သော်လည်း၊ မီးလောင်မှု ပြီးပြီးချင်း ဤသို့ မလုပ်လိုကြောင်း ပြောကြားသည်။
၁၄ ဇွန် နံနက် ၇ နာရီတွင် လန်‌ဒန် အရှေ့တောင်ဘက်မှ မြင်ရသော မီးခိုးတန်းများသည် လန်ဒန်တမြို့လုံး ဖုံးနေပြီး၊ အရှေ့ဘက် မိုင်ပေါင်းများစွာသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်ကို တွေ့ရပုံ
လန်ဒန်တဝန်း နီးကပ်သော ဧရိယာမှ လူများသည် မီးဘေးဒုက္ခသည်များကို အားပေးကူညီရန်၊ ပျိုပျိုအိုအိုမရွေး လူမျိုးဘာသာမရွေး အတူတကွ စုဝေးလာကြသည်။ အစားအစာ၊ ရေ၊ ကစားစရာများနှင့် အဝတ်အစားများကို လှူဒါန်းကြသည်။ ကင်ဆင်းတန်ရှိ နော်လန်းမှ စိန့်ဂျိန်းဘုရားကျောင်းနှင့် ထရီးဂိုးလမ်းမှ စိန့်ကလီးမင်းဘုရားကျောင်းတို့က မိမိတို့ အိမ်ရာများမှ စွန့်ခွာလာကြသော သူများအတွက် ခိုလှုံရာများ ထောက်ပံ့သည့်အပြင် အနီးရှိ ဗလီနှင့် ဘုရားကျောင်းတော်များကလည်း ကူညီကြသည်။
အနီးရှိ ဘုရင်မပန်းခြံ ရိန်းဂျား အက်ဖ်စီ (Queens Park Rangers F.C.) က သူတို့၏ လို့ဖတပ်လမ်းရိပ်သာကို ‌ခိုကိုးဌာနအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီး၊ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများက လာရောက်လှူဒါန်းသော အစားအသောက်၊ အဝတ်အထည်များကို လက်ခံပေး‌ပြီးလျှင်၊ အခြား အနီးရှိ ဘောလုံးကလပ်အသင်းများ ဖြစ်သော ဘရင့်ဖို့ဒ်နှင့် ချဲလ်ဆီး(Brentford and Chelsea football clubs) တို့ကလည်း သူတို့၏ ပွဲကြည့်စင်များကို ခိုကိုးဌာနအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။
၁၅ ရက်တွင် မီးလောင်ပြင်သို့ သီးသန့် သွားရောက်သော ဝန်ကြီးချုပ် သီရဆာ မေးက မီးလောင်မှု တာဝန်ရှိသူများ အားလုံးကို စစ်ဆေးမေးမြန်းရန် ညွှန်ကြားသည်။
အစိုးရကလည်း ပေါင် ၅ သန်း ရန်ပုံငွေကို မည်သို့ မည်ပုံ အသုံးပြုမည်ကို အသေးစိတ် ကြေညာသည်။ ရန်ပုံငွေတွင် ယာယီနေရာထိုင်ခင်းအတွက် လူများကို ကူညီရန်၊ အသုဘစရိတ်အတွက် ကူညီရန် သင်္ဂြိုဟ်စရိတ်နှင့် နေထိုင်သူများအစား တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် ကူညီရန်အတွက် ရန်ပုံငွေ စသည့်တို့ ပါဝင်သည်။ အပို ၁.၅ သန်းကို အရေးပေါ်ဌာနများတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးရန်အတွက် ထောက်ပံ့မည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
အဲလိဇဘက် ဘုရင်မကြီး(၂)က မီးဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆုတောင်းပေးသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် သီရဆာ မေးက ဝမ်းနည်းကြေကွဲပြီး၊ အစိုးရချင်း အစည်းအဝေးကို ဆင့်ခေါ်ပြီး၊ မြို့ပြ ဖြစ်တန်ရာ အတွင်းရေးမှူး(Civil Contingencies Secretaria)နှင့် တွေ့ဆုံသည်။
လန်ဒန်မြို့တော်ဝန်က ယူကျုံးမရ ဖြစ်ကြောင်း အရေးပေါ်ဌာနများအတွက် ဆုတောင်းပေးကြောင်း ထုတ်ပြန်သည်။ လေဘာခေါင်းဆောင် ဂျယ်ရမီ ကော့ဘင်းက မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးရန် လိုကြောင်း၊ အရေးပေါ်ဌာနများအတွက် ဆုတောင်‌းပေးကြောင်း ပြောကြားသည်။
မေးသည် ဂရင်းဖဲတာဝါသို့ သီးသန့် သွားရောက်ပြီး လန်ဒန်မီးသတ်ရဲမင်းကြီး ဒန်နီကော်တန်နှင့် အခြား အရေးပေါ်ဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောသည်။ Conservative MP Tobias Ellwood က လုံခြုံရေး စိုးရိမ်ရမှုကြောင့် တာဝါတွင် နေထိုင်သော လူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဘီဘီစီ နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူ Laura Kuenssberg က တာဝါတွင် နေထိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံမှု မပြုရန် မေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မကြာမခဏပင် စာ‌နာထောက်ထားမှု ကင်းမဲ့သော အပြုအမူအဖြစ် ကောက်ယူနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ချလိုက်သည်။
ဤသည်ကို ဂါဒီးယန်းသတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် မေးအတွက် ဟာရီကိန်း ကက်ထရီနာ ဝင်ခြင်းဟု အမည်တပ်သည်။
မီးလောင်ပြီး ၂ ရက်အကြာ ဂရင်းဖဲတာဝါ Grenfell Tower
ဘုရင်မကြီးနှင့် ဝီလျံမင်းသားတို့သည် မီးဘေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် ခိုကိုးဌာနအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားပြီ ဖြစ်သော ဝက်စဝေး အားကစား စင်တာသို့ သွားရောက်သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် မေးသည်လည်း ချဲလ်ဆီးနှင့် ဝက်မင်စတာဆေးရုံ၌ ဒုက္ခသည်အချို့ထံ သွားရောက်သည်။ ဒုတိယခရီးစဉ် အဖြစ်၊ ခိုလှုံဌာန အဖြစ် ဖွင့်ထားသော စိန့်ကလီးမင့်ဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက်သည်။ ထိုနေရာမှ နေ၍ မီးဘေး နစ်နာသူများအတွက် ပေါင် ငါးသန်းကို ထောက်ပံ့ကြောင်း ကြေညာပြီး၊ နေထိုင်သူများကို နောက်သုံးပတ်အတွင်း ဤဘိုရော့မြို့ပြအတွင်း ဖြစ်စေ၊ အနီးအနား ဘိုရော့မှာ ဖြစ်စေ တတ်နိုင်သလောက် ဂရင်းဖဲတာဝါနှင့် နီးကပ်သော အိမ်ရာသစ်ကို ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုသည်။ လူအချို့က သူမကို သူရဲဘောကြောင်သူ၊ လူသတ်သမား၊ ရှက်ဖွယ် ဟု အော်ဟစ်ကြသည်။ အသေးစား သတ်ပုတ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယခင်ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါလီမန်အမတ် မက်သယူး ပဲရစ်က တိုင်းမ်တွင် ရေးသားသော ဆောင်းပါး တပုဒ်တွင် သူမကို "စိတ်ထားကောင်းပြီး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်သူ တဦး၊ တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးချင်ပြီး လူမမြင်ကွယ်ရာတွင် ခံစားချက်များကို ဖော်ထုတ်တတ်သော်လည်း၊ လူရှေ့သူရှေ့တွင် ခံစားချက်များ မြိုသိပ်ထား၍ ပင်ပန်းနေရသည်"ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းနောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒရီးယာ လိဒ်ဆမ်က မေး၏ တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဒေါသထွက်သွားသော နေထိုင်သူများက ရန်ပြုခြင်းကို ခံရသည့် ရပ်ဂဘီ ပေါ်တိုဘဲလို ထရပ်ရှိ ခိုလှုံဌာနသို့ သွားရောက်ပြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဂရင်းဖဲတာဝါ၌ ဖြစ်ပွားသော မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်အပေါ် လုံးဝ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကောဘင်းသည် အနီးရှိ လူမှုဌာနသို့ သွားရောက်ကာ မီး‌ဒဏ် ခံစားရသူများကို ကူညီနေသည့် လုပ်အားပေးအချို့ကို အားပေးစကား ပြောသည်။
၁၆ ဇွန် ၂၀၁၇ မွန်းလွဲအတွင်း၊ ရာပေါင်းများစွာသော လူများသည် ကင်ဆင်းတန် မြို့တော် ခန်း‌မရှေ့ ဆန္ဒ ပြပြီး၊ နစ်နာသူများကို ဘိုရော့အတွင်း အိမ်ရာ ပြန်ပေးရန်နှင့် ရန်ပုံငွေများကို ငှားရမ်းသူ အိမ်ရာမဲ့များအတွက်လည်း ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုကြသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် သီရဆာမေး၏ ကားနောက်သို့ ပြေးလိုက် ကြသည်။  ဆန္ဒပြသူအချို့၏ အပြုအမူများကြောင့် ကောင်စီဝင် အရာရှိ တော်တော်များများကို အဆောက်အဦများမှ ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရသည်။
မေးသည် အမှတ် ၁၀၊ ဒေါင်းနင်းလမ်းတွင် နစ်နာသူများနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
မီးလောင်မှု နောက်ဆက်တွဲကို စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကို ကင်ဆင်းတန်နှင့် ချဲလ်ဆီး လန်ဒန် ဘိုရော့ကောင်စီဆီမှ ဖယ်ရှားလိုက်သည်။ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော၊ ဗဟိုအစိုးရနှင့် အခြား ဒေသအစိုးရလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လန်ဒန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့ပြရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဗြိတိသျှ ကြက်ခြေနီအသင်းတို့ ပါဝင်သော အဖွဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကို လွှဲအပ်သည်။
ကင်ဆင်းတန်နှင့် ချဲလ်ဆီး လန်ဒန် ဘိုရော့ ကောင်စီ အကြီးအကဲ၊ နီကိုလပ် ဟိုလ်ဂိတ်သည် နုတ်ထွက်လိုက်သည်။ ဟိုလ်ဂိတ်က သူ့ကို ဒေသအစိုးရ အတွင်းရေးမှူးဆဂျစ် ဂျာဗစ်က နုတ်ထွက်ခိုင်းသည်ဟု ဆိုပြီး၊ အစိုးရက ငြင်းဆိုသည်။
တေးထုတ်လုပ်သူ ဆိုင်မွန် ကိုဝဲ(Simon Cowell)သည် ဘိုရော့အပိုင်းတွင် နေထိုင်ရာ၊ ဆိုင်မွန်နှင့် ဂါဖန်းကဲ(Garfunkel)၏ လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ တံတား("Bridge over Troubled Water")ကို အလှူခံသီချင်းအဖြစ် အနီးရှိ စာမ်းဝက်စတူဒီယိုတွင် အသံသွင်းပြီး အလှူခံရာ၌ သီဆိုရန် စီစဉ်သည်။ ပါဝင်သည့် အဆိုတော်များမှာ
choir conductor Gareth Malone, and
Stereophonics singer Kelly Jones. တို့ ဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်း အနုပညာရှင် ငါးဆယ်‌ခန့် ပါဝင်ပြီး ထိုတပုဒ်တည်းသော သီချင်းကို ၂၁ ဇွန် တွင် ဖြန့်ချိလိုက်သည်။ ဂရင်းဖဲအနုပညာရှင်များဟု ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဖြန့်ချိလိုက်သော အဆိုပါ သီချင်းသည် ပထမဆုံးနေ့တွင် ကော်ပီပေါင်း ၁၂၀၀၀၀ ရောင်းချရပြီး၊ ၂၀၁၀ ဝန်းကျင်တွင် ဖွင့်ပွဲရက်၌ အရောင်းရဆုံး တေးသီချင်း ဖြစ်လာသည်။ ဂါးရက် မလုံး ဦးဆောင်သော သံပြိုင်အဖွဲ့တွင် ဂရင်းဖဲတာဝါ နေထိုင်သူများ ပါဝင်ထားသည်။
မီးလောင်ပြီး နောက်ရက်များတွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ တဝန်းရှိ ဒေသအာဏာပိုင်များသည် ဘရိုက်တန်နှင့် ဟဗ်စီးတီး ကောင်စီ Brighton and Hove City Council, ဆွင်းဒန်း ဘိုရော့ ကောင်စီ Swindon Borough Council, ကမ်ဒင်း လန်ဒန် ဘိုရော့ ကောင်စီ Camden London Borough Council, ဟောင်းစလိုး လန်ဒန် ဘိုရော့ ကောင်စီ Hounslow London Borough Council, နယူးဟမ်း လန်ဒန် ဘိုရော့ ကောင်စီ Newham London Borough Council, ဝင်းစဝါ့ လန်ဒန် ဘိုရော့ ကောင်စီ Wandsworth London Borough Council, နှင့် ကင်ဆင်းတန်နှင့် ချဲလ်ဆီး လန်ဒန် ဘိုရော့ ကောင်စီ Kensington and Chelsea London Borough Council တို့ ပါဝင်သော သူတို့၏ လူနေထိုင်ရာ တာဝါတိုက်များကို မီ‌းဘေး လုံခြုံရေး စစ်တမ်းများ ဆောင်ရွက်ကြတော့သည်။
ဒေသခံ မြို့ပြအဖွဲ့က မီးလောင်မှုကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် စစ်ဆေးနိုင်ရေး တောင်းဆိုသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် သီရဆာ‌ မေးက လူတိုင်းသည် မီးဘာကြောင့် ဤလောက် မြန်မြန် လောင်ကျွမ်းရသလဲ ဆိုသည့် မေးခွန်း တာဝန်ရှိသူများ မေးလာသည်ကို မကွယ်မထောက် ဖြေဆိုရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု အမိန့်ထုတ်သည်။
လကနလ် အိမ်ရာ မီးဘေးတွင် မိသားစုဝင်များဘက်မှ ရှေ့နေလိုက်သူ ဆိုဖီခန်းက မိသားစုဝင်များကို ပါဝင် မေးခွန်းများ မေးခြင်းက ပိုကောင်းနိုင်သည်။ သေမှုသေခင်းအရာရှိက လွတ်လပ်စွာ မေးနိုင်သည် မှန်သော်လည်း အများပြည်သူကို မေးရာတွင် အစိုးရက ဦးဆောင်မည် ဖြစ်၍ ဝန်ကြီးချုပ်က မည်သည့်အကြောင်းအရာကို သိထား၍ ကွယ်ဝှက်ချင်နေသည်ကို သူမ စိတ်ဝင်စားမိကြောင်း ဘီဘီစီကို ပြောသည်။
မြို့ပြရဲ အရာရှိ ကော်မန်ဒါ စတူးဝပ် ခံဒီက မည်သည့်ရာဇဝတ်မှုများကို မဆို စွဲချက်တင်နိုင်ရန် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများ ဖွင့်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းရေး၏ အခြား အမြင်တစ်ခုမှာ ဂရင်းဖဲတာဝါကို ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံစဉ် တပ်ဆင်ခဲ့သည် အုတ်ကြွပ်ပြား၏ အမျိုးအစားကို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက် ပေးခဲ့သောအခါက အဆောက်အဦ၏ စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှု ရှိခဲ့သလား ဟု ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ မန်ချက်စတာ ဇာတ်ရုံ ဗုံးကွဲခြင်း
၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၅ လန်ဒန် ဗုံးပေါက်မှုများ
↑ (earlier)၊ Nicola Slawson (now) Caroline Davies (18 June 2017)။ Grenfell Tower fire: Police say at least 58 missing as No 10 says each family to get £5,500 – live updates။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “... the next figure of those presumed dead and missing will be released tomorrow, Monday, 19 June. The figure will be higher but I do not wish to speculate on that number today.”
↑ Bentham၊ Martin။ "London fire: Grenfell Tower death toll reaches 17 as fire chief says 'no more survivors'"၊ Evening Standard၊ 15 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Metropolitan Police Commissioner at Press Conference 17 June 2017
↑ "Everyone Was Helping"၊ The Telegraph (India)၊ 15 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2017။
↑ Heathcote၊ Edwin။ "London tower block's refurbishment raises fire safety questions"၊ Financial Times၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2017။
↑ Planning Statement။ Royal Borough of Kensington and Chelsea။ 17 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Royal Borough of Kensington and Chelsea။ Grenfell Tower။ rbkc.gov.uk။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Buildings of London – Grenfell tower။ emporis.com။ 17 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower floorplan shows how 120 flats were packed into highrise။ The Telegraph။ Telegraph Media Group (14 June 2017)။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower။ Emporis။ 17 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower regeneration Project Archived 17 June 2017 at the Wayback Machine. Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. , rbkc.gov.uk; accessed 16 June 2017.
↑ Lancaster West Estate: An Ideal For Living?။ 15 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower Regeneration Project Engagement Statement။ Royal Borough of Kensington and Chelsea။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Waite၊ Richard။ Grenfell Tower: residents had predicted massive fire။ The Architects Journal။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hills၊ Joe (15 June 2017)။ Grenfell Tower: Original proposed contractor was dropped to reduce cost of refurbishment project။ ITV News။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rydon lands Grenfell Tower refurbishment။ rydon.co.uk။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ White၊ Charles။ "Cladding added to Grenfell Tower to 'improve view for nearby luxury flats'"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Prynn၊ Jonathan (15 June 2017)။ Revealed: 'Chimney' Grenfell Tower cladding is used on blocks across London။ Evening Standard။ 15 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Town and Country Planning (Development Management Procedure) Order 2010 – Approval of Details Reserved by Condition(s)။ Royal Borough of Kensington and Chelsea (30 September 2014)။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Arconic Architectural Products/Arconic Inc.။ Reynobond Europe ACM ACP Aluminium Composite Material။ arconic.com။ 17 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Reynobond aluminium composite panels is an aluminium panel consisting of two coil-coated aluminium sheets that are fusion bonded to both sides ofapolyethylene core.”
↑ Grenfell Tower, Notting Hill။ Harley Facades။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Davies၊ Rob။ Grenfell Tower's managers were reviewing safety after fire at another block။ 15 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower, London, W11 1TQ – Regeneration Project။ Witt Group။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Tower block fire safety warnings ‘fell on deaf ears’, residents’ group claims"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။ Archived from the original on 17 June 2017။
↑ Grenfell Tower regeneration newsletter July 2014။ Royal Borough of Kensington and Chelsea။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ London fire: Tower victims 'may never be identified'။ BBC News Online။ 16 June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Bell၊ Bethan။ London fire: A tale of two tower blocks။ BBC News Online။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Picone၊ Susanna။ "Incendio Londra, il papà di Marco: “Mi aveva detto che il grattacielo non era sicuro""၊ 18 June 2017။
↑ Wahlquist၊ Calla။ "Fire safety concerns raised by Grenfell Tower residents in 2012"၊ The Guardian၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ "Another Fire Safety Scandal"၊ Grenfell Action Group၊ 21 February 2013။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ "Kensington and Chelsea Council threatened Grenfell Tower blogger with legal action after he brought up fire safety"၊ The Independent၊ 15 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ "Residents warned of fire risk at London tower block gutted by blaze"၊ ABC News၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Grenfell Action Group (20 November 2016)။ KCTMO – Playing with fire!။ wordpress.com။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ grenfellactiongroup (21 February 2013)။ Another Fire Safety Scandal။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Rozsa၊ Matthew။ "Residents warned that London's Grenfell apartment wasadeath trap before fire"၊ Salon၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ "What we know so far about the London tower block fire"၊ The Guardian၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ "London fire: Six killed as Grenfell Tower engulfed"၊ BBC News၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ "Drunk emerges as an unlikely hero in the Grenfell Tower horror fire after he randomly hit the fourth floor lift button"၊ The Sun၊ 17 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lubin၊ Rhian (14 June 2017)။ Muslim boys up late for Ramadan 'saved lives' by waking Grenfell Tower residents။ 17 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Muslims awake for Ramadan may have saved lives after raising alarm for horrific London tower blaze"၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Millward၊ David။ "'The whole building has gone': Witnesses describe screams and tears at Grenfell Tower fire in London"၊ The Telegraph၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ London fire brigade boss: ‘It wasamassive risk, but it’s our job to go in’။ The Guardian (17 June 2017)။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bulman၊ May။ "Grenfell Tower graphic: what we know about how the fire spread"၊ The Independent၊ Independent Print Limited၊ 16 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Grenfell Tower fire: No survivors expected to be found with figure to rise significantly"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers၊ 15 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Firefighters battle huge blaze in London" (in en)၊ News.com.au၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Weaver၊ Matthew။ "London fire: six people confirmed dead after tower block blaze – latest updates"၊ The Guardian၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2017။
↑ Hartley-Parkinson၊ Richard။ "Video shows man making rope out of bed sheets to try and escape"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2017။
↑ "Fire service says will be dealing with London tower block fire for next 24 hours"၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2017။
↑ Tom Towers။ "Riot police protect firefighters from falling debris Grenfell tower block fire"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers၊ 14 June 2017။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ BBC TV news footage
↑ "London fire: 58 missing, presumed dead – police"၊ BBC News၊ BBC၊ 17 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ London fire: Latest updates as Grenfell Tower fire recovery continues။ BBC (18 June 2017)။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Witte၊ Griff။ "London high-rise fire leaves multiple people dead, dozens injured and others missing"၊ The Washington Post၊ 14 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ AP News: London fire latest: Grenfell Tower fatalities confirmed after residents trapped။ The Telegraph (14 June 2017)။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "London Fire: Structural engineer is monitoring Grenfell Tower's stability after devastating blaze"၊ Independent၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Hunt၊ Elle။ "London fire: fears of people trapped as major blaze engulfs tower block – latest"၊ The Guardian၊ 13 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Masters၊ James။ "London fire: Mourning, anger and questions over lives lost in inferno"၊ CNN၊ 15 June 2017။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Bulman၊ May။ "30 people confirmed dead in Grenfell disaster"၊ The Independent၊ 16 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ Erlanger၊ Steven။ "Fire Engulfs Apartment Tower in London"၊ The New York Times၊ 13 June 2017။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Derbyshire၊ Victoria (14 June 2017)။ Victoria Derbyshire 14 June 2017။ Victoria Derbyshire (14 June 2017 ed.)။ BBC News။ event occurs at 8 mins။ started on the fourth floor... my neighbour said his fridge exploded... no alarm until half-past one
↑ Geoff Wilkinson (14 June 2017)။ Grenfell Tower: residents had predicted massive fire။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Doward၊ Jamie (17 June 2017)။ Grenfell Tower: the chronicle ofatragedy foretold။ The Guardian။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “"If the building had been provided with sprinklers then that fire, if it started in the kitchen, would never have got out of the kitchen and nobody except the firefighters who would have gone there to mop up would have known about it."”
↑ Da Silva၊ Chantal။ "Grenfell Tower fire: Survivor recounts 'tripping over bodies' in harrowing escape"၊ Independent၊ 16 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower resident quoted as saying that 999 officers told them to stay put, dailymail.co.uk; accessed 16 June 2017.
↑ Radical Housing Network Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. , landforwhat.org.uk; retrieved 14 June 2017.
↑ Foster၊ Dawn။ "A Very Political Tragedy"၊ Jacobin၊ 14 June 2017။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Grenfell Tower is Theresa May’s Katrina moment – her political career cannot survive it"၊ The Independent၊ 16 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၉.၀ ၆၉.၁ Watts၊ Joe။ "Gavin Barwell: Theresa May's new chief of staff faces questions over delayed tower block fire safety review"၊ The Independent။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Watson၊ Leon။ "Did faulty fridge cause Grenfell Tower fire? The theories fire chiefs will examine"၊ The Telegraph၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Waugh၊ Rob။ "Council 'threatened blogger with legal action' over Grenfell Tower warnings"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Pasha-Robinson၊ Lucy။ "Residents inside 24-storey London flats on fire were told to stay inside in case of blaze"၊ The Independent၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Dixon၊ Hayley။ "Grenfell Tower infernoa'disaster waiting to happen' as concerns are raised for safety of other buildings"၊ The Telegraph၊ Telegraph Media Group၊ 14 June 2017။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။ "Many of those that survived only did so by ignoring official advice to stay in their rooms and close their front doors until the fire was over. ... All fire safety regulations are focused on containingafire withinabuilding, but this cannot happen if it is spreading along the outside."
↑ Merrick၊ Rob။ "Cabinet reshuffle: Theresa May appoints Damian Green as 'deputy' day after losing two top aides"၊ The Independent၊ 11 June 2017။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 11 June 2017။
↑ Slawson၊ Nicola။ "Labour rounds off remarkable election with narrow victory in Kensington"၊ The Guardian၊9June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ Amelia Gentleman, "'Unforgivable': local Labour MP vents fury over Grenfell Tower fire" Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
↑ 'Where are we going to live?'
↑ "London fire: A visual guide to what happened at Grenfell Tower"၊ BBC၊ 16 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ "Notting Hill pastor blames 'disgusting' treatment of poor for inferno"၊ 14 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Look at Grenfell Tower and see the terrible price of Britain's inequality။ The Guardian (16 June 2017)။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ‘Jail those responsible’: how Grenfell Tower residents’ grief turned to rage Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
↑ Council attacked for stockpiling £274m despite Grenfell Tower residents' calls for fire safety improvements။ The Independent (17 June 2017)။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower fire: Government staff sent in to Kensington and Chelsea Council။ BBC (18 June 2017)။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MP: 'Charity is doing government's work after Grenfell. It's an outrage, it's appalling'။ The Independent (18 June 2017)။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Eder၊ Sebastian။ "Feuerwehr-Chef im Gespräch: Warum ein Feuer wie in London in Deutschland unwahrscheinlich ist" (in de)၊ Frankfurter Allgemeine Zeitung၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Tube, Overground, TfL Rail, DLR & Tram status updates။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Major fire in west London။ Transport for London။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tamplin၊ Harley။ "Tube lines suspended amid Grenfell Tower safety concerns"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Sky News – Live"၊ Sky News။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Kensington Aldridge Academy (in en-US)။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ KAA Letter to Parents Re Grenfell Tower Fire (2017)။ 20 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Theresa May and DUP deal could be delayed until next week"၊ BBC News၊ 14 June 2017။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ "London fire could delay deal between UK PM May's Conservatives and DUP: BBC"၊ 14 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ "City cancels Mansion House dinner after tower tragedy"၊ BBC News၊ BBC၊ 15 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Morley၊ Nicole။ "How people are helping those affected by the Grenfell Tower fire"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ "Mosques are opening their doors to residents evacuated due to huge London tower blockfire"၊ The Independent၊ 14 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Grenfell Tower fire victims offered Loftus Road as relief centre by QPR owner Tony Fernandes။ Sky Sports (14 June 2017)။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Grenfell Tower fire: support for people affected – GOV.UK (in en)။
↑ Watts၊ Joe။ "Grenfell Tower fire: Theresa May orders emergency meeting to tackle fallout from deadly blaze"၊ The Independent၊ 14 June 2017။ Archived from the original on 14 June 2017။
↑ Mayor of London's latest statement on major fire at Grenfell Tower။ Mayor of London။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Labour demands answers over Grenfell Tower fire tragedy။ BBC News။ 14 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kuenssberg၊ Laura။ Huge challenge of Grenfell will test fragile government။ BBC News။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Guardian view on Grenfell Tower: Theresa May's Hurricane Katrina။ The Guardian (15 June 2017)။ 15 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Grenfell Tower latest: London fire death toll rises to 30 as anger grows over safety failings"၊ The Telegraph။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ London fire: Queen and Prince William visit Grenfell Tower centre။ BBC News Online။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Theresa May announces £5m fund for Grenfell fire victims"။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ Hartley-Parkinson၊ Richard။ "Angry crowds shout ‘coward’ and ‘murderer’ at Teresa May as she leaves Grenfell Tower relief centre"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ Theresa May heckled by angry crowds။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Matthew Parris, Matthew Parris on Theresa May, The Times; accessed 16 June 2017.(အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ "Andrea Leadsom confronted over PM not meeting Grenfell Tower victims"၊ Sky News၊ British Sky Broadcasting၊ 16 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower: Police hope fire death toll 'not triple figures'။ Sky News။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grenfell Tower latest: Angry protesters storm Kensington Town Hall as angry crowd chases Theresa May's car။ 16 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Grenfell Tower fire: protesters march as anger mounts over disaster response – live"၊ The Guardian၊ 16 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ "Grenfell Tower protesters turn on Kensington council staff trying to leave offices"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers။
↑ BBC Live Report Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
↑ Masters၊ James။ "London fire: Theresa May meets with victims at Downing Street"၊ CNN။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ McAskill၊ Ewan (18 June 2017)။ Council sidelined in Grenfell Tower response as leader refuses to quit။ The Guardian။
↑ London fire: Kensington council boss quits over Grenfell tragedy။ BBC (21 June 2017)။
↑ "Simon Cowell to record Grenfell Tower charity single"၊ BBC News၊ BBC၊ 16 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Simpson၊ Fiona။ "Liam Payne and Stormzy among stars to perform on Grenfell Tower charity single, Simon Cowell confirms"၊ London Evening Standard၊ 17 June 2017။ 17 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ London fire: Stars gather to record charity single (18 June 2017)။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ James၊ Ben။ Sprinklers to be added to two high rise blocks in Brighton as safety review ordered။ The Argus။ Newsquest။ 15 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Haworth၊ Thomas။ Swindon tenants 'have no need to fear fire'။ Swindon Advertiser။ Newsquest။ 15 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mills၊ Jen။ "How many more buildings in London have the same cladding as Grenfell Tower?"၊ Metro.co.uk၊ Associated Newspapers၊ 15 June 2017။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 June 2017။
↑ Council statement following Grenfell Tower fire။ Wandsworth London Borough Council (14 June 2017)။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "London fire: Prime minister orders full public inquiry"၊ BBC News။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
↑ Shaw, Danny [DannyShawBBC] (15 June 2017)။ Interesting to hear Lakanal House residents' lawyer Sophie Khan tell @BBCNewsnight inquests would be better than public inquiry ... 1/2။
↑ Shaw, Danny [DannyShawBBC]။ Sophie Khan says Govt has more control in public inquiry & victims can participate & ask questions during inquests. @BBCNewsnight 2/2။ Missing or empty |date= (help)
↑ "Grenfell Tower fire: Police open criminal investigation into blaze that killed 17 as fears grow death toll could reach 100"၊ The Independent။ 15 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 June 2017။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂရင်းဖဲတာဝါ_မီးလောင်မှု&oldid=727832" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။